क्यान्सर, सुगर र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगको औषधी हो यो फूल…हेर्नुहोस् ।(प्रयोग गर्ने तरिका सहित) – yuwa Awaj
क्यान्सर, सुगर र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगको औषधी हो यो फूल…हेर्नुहोस् ।(प्रयोग गर्ने तरिका सहित)
कार्तिक १८, २०७७ मंगलबार 5
सदाबहार फूल = Catharanthus roseues परिवारमा पर्ने यस फूललाई नेपालीमा सदाबहार फूल स‌‌‍स्कृतमा नित्य कल्याणी वा सदा पुष्प र अ‍ग्रेजीमा Rose Periwinkle or Old maid भनिन्छ ।
हाम्रो घर आगनमा जताततै पाइने यो वनस्पतिमा क्यान्सर, सुगर र उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सक्ने अचुक औषधिय गुण हुन्छ । आज हामी यसैका बारेमा चर्चा गरेका छौं ।
सुगर– यो वनस्पतिको सम्पुर्ण बोटमा १५० प्रकारका Alkaloid पाइन्छ ।
जसको प्रयोगले शरिरमा Hypoglycemic effect गर्ने हुनाले रगतमा भएको चिनीकोमात्रा घटाउन महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । यसमा रहेका Alkaloid ले Pancreas को Beta Cell लाई शक्तिशालि बनाउने भएकाले Pancreasले उत्पादन गर्ने Harmon Insulin को उत्पादन र वितरण सन्तुलित मात्रामा हुने गर्दछ ।
Prevअब ओली र प्रचण्डबाट आशा नगर्नुस् – नेकपा नेता प्रदीप !
Nextनेकपा फुटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव…हेर्नुहोस् ।
जनार्दन शर्मा भन्नुहुन्छ : मैले नियुक्ति गरेको कुलमानलाई जसरी फाल्नुभयो त्यसरीनै आफू बिदा हुनुस् !
बधाई ! युकेमा जारी मास्टरसेफ २०२०’ प्रतियोगितामा उप विजेता बने सन्तोष शाह…हेर्नुहोस ।
गीत, संगीतको विषयमा भिटेनलाई प’क्राउ गर्नुपर्ने कारण छैन : उच्च अदालत…हेर्नुहोस् ।